नेपाल लोक स्टारबाट भाईरल भएका मधुसुदन मिडियामा, कसरी बने हासोको पात्र ? यस्तो छ कहानी (भिडियो सहित) - www.dthreeonline.com
नेपाल लोक स्टारबाट भाईरल भएका मधुसुदन मिडियामा, कसरी बने हासोको पात्र ? यस्तो छ कहानी (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०४, २०७६ समय: १६:२०:३८
ईटहरी/ नेपाल लेक स्टारमा इटहरीबाट अडिसन दिएका मदुसुदन न्यौपाने यतिबेला चर्चामा आईरहेका छन् । इटहरीका अपरिचीत मदुसुदन नेपाल लोक स्टारमा अडिसन दिएपछि अहिले नेपालभर परिचित बनेका हुन् । केहि दिन अघि सार्बजनिक नेपाल लेक स्टारको इटहरी अडिसनमा उनको प्रस्तुतिले यतिबेला चर्चा पाएको हो । मदुसुदनको चर्चा बढ्दै गएपछि यतिबेला उनि मिडियामा आउन थालेका छन् । हेर्नुस उनि पहिलो पटक मिडियामा यसरि प्रस्तुत भए ।
मदुसुदन भन्छन् “मैले त्याहाँ गएर धेरै कुरा सिक्न पाएको छु, म नेपाल लोक स्टारमा नजाउञ्जेल सम्म मलाई थाहाँ थिएन मेरो नराम्रो गाउछु भनेर तर त्याहाँ गएपछि मात्र मैले थाहा पाए, जे होस यो मेरो लागि फाईदाजनक नै भयो ।” सिङगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल लोकस्टार’ एपीवान एचडी टेलिभिजनबाट प्रशारण भैरहेको छ । मदुसुदनले अडिसनमा दिएको प्रस्तुति भन्दा बिल्कुलै फरक माथिको अन्तरबार्तामा देखिएको छ ।
उनको अनुसार त्यहा बातावरण नै त्यस्तै भएको र आफ्नो लोक टोन नभएकोले त्यस्तो हुन पुगेको हो । लोक स्टारका विजेताले नगद रु ५० लाख रुपैयाँ पाउने छन् । आयोजकका अनुसार दोस्रो हुनेलाई २५ लाख (करसहित) र तेस्रो हुनेलाई १० लाख रुपैयाँ (करसहित) पुरस्कार प्रदान गरिने छ । ‘नेपाल लोकस्टार’को निर्णायकमा जयनन्द लामा, सुनिता दुलाल, रामजी खाँड र बिबि अनुरागी छन् । यो कुनै फ्रान्चाएज सो होइन यो आर्गानिक नेपाली सो भएता पनि फ्रान्चाएज भन्दा कमको छैन ।